လွှတ်တော်အမတ်တွေ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေ အခုနှစ်မကုန်ခင်ထွက်လာနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေ
လွှတ်တော်အမတ်တွေ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေ အခုနှစ်မ...
25 ต.ค. 2562 - 13:17 น.
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီက မူကြမ်းရေးဆွဲနေပြီး ဒီနှစ်မကုန်ခင် ကိုယ်စားလှယ်တွေဆီကို ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာလှမိုးက ပြောပါတယ်။
ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကအစ ပြုမှုနေထိုင်ပုံ၊ ပြောဆိုဆက်ဆံပုံ စတဲ့ မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ တားမြစ်ထားတဲ့ အချက်တွေနဲ့ လုပ်သင့်တဲ့အချက်တွေကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
"မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ ပြည်သူနဲ့ တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်၊ တွေ့တဲ့အခါမှာ ယဉ်ကျေးစွာ ပြောရမယ်၊ ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းတွေကို မဖြုန်းတီးရဘူး၊ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ အလွဲသုံးစား မလုပ်ရဘူး" စတဲ့ အချက်တွေ ထည့်သွင်းရေးထားတယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာလှမိုးက ပြောပါတယ်။
NLD လွှတ်တော် အမတ် ၃၅၀ကျော် တိုင်ကြားခံရ
နေပြည်တော် လွှတ်တော်ရုံး တခုအတွင်းက တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ
တကယ်တော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်တွေမှာ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ တာဝန် လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့ နည်းဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အခု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကိုတော့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာလှမိုးကတော့ ဒီကျင့်ဝတ်တွေဟာ လိုက်နာရမယ့် ဥပဒေ မဟုတ်ဘဲ လိုက်နာဖို့လိုတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကတော့ ဒီကျင့်ဝတ်တွေဟာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ဖို့လိုပြီး အားလုံးလိုက်နာလာအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့လည်း လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"ကျွန်မတို့ဆီမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ၂ ခုရှိတာပေါ့၊ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေရှိတယ်၊ ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်တွေ ရှိတယ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံးကို ခြုံမိသလား ဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့၊ အားလုံးခြုံတယ်၊ အားလုံးနဲ့ လိုက်နာရမယ်ဆိုရင်တော့ မဆိုးလှဘူးပေါ့၊ နို့မို့ဆိုရင်တော့ ဒါက ဆွေးနွေးစရာ ဖြစ်လာမှာပေါ့" လို့ အိမ်မဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မသန္တာက ပြောပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာလှမိုး ကတော့ ဒီကျင့်ဝတ်မူကြမ်းထွက်လာဖို့ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကော်မတီတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အခုတော့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်မူကြမ်းကို ကိုယ်စားလှယ်တွေကြား ချပြ သဘောတူညီချက်ယူမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီနောက် ဒီနှစ်မကုန်ခင် ကျင့်ဝတ်ထွက်ရှိလာနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ ဒေါက်တာလှမိုးက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ လွှတ်တော်အမတ်တွေ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေ အခုနှစ်မကုန်ခင်ထွက်လာနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေ